Ala oyi: kedu ihe ha bụ, njirimara na nhazi | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Climatology
N'ọdịdị botanical meteorology, the ala okpomọkụ iji kewaa ìgwè dị iche iche nke elu na-akọwa site na ugwu ebe enwere mgbanwe dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ na ihe ndị ọzọ nke ihu igwe. Ihe na-ekpebi ọnọdụ ihu igwe dị elu karịa oke osimiri na isi ihe na-emetụta ihu igwe nke omume a metụtara bụ ọnọdụ okpomọkụ.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile na mkpa ụlọ ala a dị.
2 Ala oyi, okpomọkụ na elu
3 Therdị ala nke okpomoku
3.1 Okpomoku di okpomoku
3.2 Premontane kwes n'ala
3.3 Ala okpomọkụ
3.4 Oyi okpomọkụ ala
3.5 Oke ala
3.6 Mkpụrụ ala
A na-akọwa ala seramiki dị ka mgbanwe ihu igwe nke na-eme na mpaghara ugwu. Enyemaka na-emetụtakwa mmiri ozuzo, ebe ọ bụ na ifufe mmiri na-ebugharị na ugwu ma na-arị elu. A na-enwekarị obi ụtọ maka ala ebe a na-ekpokarị ọkụ na mpaghara ikuku, mgbe ha na-adịkarị n’ebe ndị mara mma a kọwara ha. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọnọdụ okpomọkụ dị na mpaghara oyi na oyi na-emetụta ọtụtụ ọdịiche kwa afọ na radieshon nke anyanwụ.
Ọ bụrụ na anyị nyochaa ihe ndị gbara ya gburugburu, anyị na-ahụ na e nwere ọdịiche dịgasị iche na ịdị elu na ha bụ ihe na-akọwa mgbanwe dị iche iche dị na okpomọkụ. Nke a bụ otu esi agbanye ala ala ala 5, nke kachasị dị ala bụ ala na-ekpo ọkụ yana mgbe ahụ ọnọdụ oyi, oyi, ala na ala mmiri igwe. Maka ala nke ọ bụla, a na-ekpebi njupụta na mgbanwe nke ịdị elu nke okpomọkụ, yana àgwà ndị ọzọ metụtara ya.
Ihe dị iche iche nke ala ikuku na-esite na ntọala sitere na ọnọdụ okpomọkụ dị n'ụzọ doro anya na mpaghara mpaghara. Na mpaghara dị jụụ, ọnọdụ okpomọkụ na-agbada na elu, mana ọ bụghị mmetụta dị oke akara. Nke a bụ n'ihi na na ọnọdụ dị jụụ enwere ihe ndị ọzọ na-ekpebi ọzọ dị ka ohere. Latitude bụ otu n'ime mgbanwe ndị anyanwụ radieshon ọ na-emetụta dabere na nghazi nke mkpọda. N'akụkụ nke ebe okpomọkụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ banyere radieshon nke anyanwụ na-abịarute na nsogbu nke ifufe na mmiri ozuzo.
Ala oyi, okpomọkụ na elu
Okpomọkụ na ohere dị iche iche bụ isi na-akọwapụta ala okpomọkụ dị iche iche. Ikuku na-ekpo ọkụ n'ihi ntuli aka nke na-erute ala ma ikuku dị ọkụ na-ebelata ike, ya mere, na-adị ọkụ, ọ na-arị elu. Ogologo okpomọkụ na-agbadata n'etiti 0.65 na ogo 1 maka mita 100 ọ bụla na ịdị elu na-abawanye.
Ugwu ahụ na ịdị elu nke ugwu ọ bụla na-emetụtakwa ọchịchị ikuku na mmiri ozuzo. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọ bụrụ na ugwu abanye n'okporo ụzọ nke ifufe mmiri na-ekpuchi, ha na-arịgo ma na-emecha ọdịda na mpaghara kachasị elu nke ugwu ahụ. Ọ bụrụ na ịdị elu nke ugwu dị elu, ifufe na-ajụkwa oyi ma iru mmiri ahụ na-ebelata n'ebe ugwu iji mee ka mmiri zoo. N’ugwu ndị dị elu, nri ndị ahụ na-ejikarị agbapụ mmiri dị na mpaghara ikuku ikuku na na mkpọda ahụ na-abụkarị nkụ.
Latitude bụ ọnọdụ nke mpaghara gbasara Equator ma na-emetụta ala okpomọkụ na nsogbu nke radieshon nke anyanwụ n'afọ niile. Site na latitude anyị hụrụ na ụzọ ụzarị anyanwụ na-esi emetụta eriri warawara dị n'otu. Ọ baghị uru ebe ị nọ n ’anyanwụ, ebe ọ bụ na mpaghara ebe okpomọkụ na-enwete radieshon ya oge niile. N'aka nke ọzọ, anyị nwere nke ahụ, na ugwu ndị dị elu, nke a anaghị eme. Ọ bụ n'ihi ọchịchọ nke ụwa ka anyanwụ na-acha mgbe ọ na-awa N'ụzọ dị elu na ịdị elu anaghị agbanwe ọnọdụ okpomọkụ nke ukwuu, ebe ọ bụ na ụzarị ọkụ anaghị adị na mbara igwe.
Therdị ala nke okpomoku
E nwere ihe dịka ụdị 5-6 nke ala ikuku na mpaghara mpaghara. Ihe bụ isi dị iche na ala ndị a bụ ọnọdụ okpomọkụ. Ka anyị lee ihe dị iche iche dị adị:
Okpomoku di okpomoku
Ọ bụ otu nke na-eweta okpomọkụ dị elu na nso nso 28 degrees na nkezi na ala ya dị ala na 24 degrees na elu nke 900-1000 mita n'elu ọkwa mmiri. N'ime ala mmiri a, a na-ewepụta usoro okike nke oke mmiri ozuzo, oke ohia, savannas na ụfọdụ ala kpọrọ nkụ na mpaghara ala nke ụwa. N'akụkụ ala nke mpaghara ndị dị na Ecuador, a nabatara nnukwu mmiri ozuzo n'ihi ogbako nke ifufe mmiri si n'akụkụ abụọ.
Premontane kwes n'ala
A makwaara ya site na aha nke okpukpu ọkụ na-agụnye ebe ndị dị n’agbata mita 900-1700 n’elu oke osimiri. O ruru ogo 18-24 ogo. Nke a bụ obere ugwu igwe ojii dị ala na oke mmiri ozuzo na-ewere ọnọdụ. Mmiri ozuzo a bụ maka ndị ikuku na-arị elu na-ekpo ọkụ na -eme igwe ojii ma na-eme mmiri ozuzo.
A makwaara ya site na aha mesothermal. Mpaghara nke n’agbata mita 1000-2000 n’elu oke osimiri. Ọnọdụ okpomọkụ ya dị gburugburu 15-18, na-eru ogo 24 na mpaghara ụfọdụ. N'ime ugwu ndị a, a na-etolite oke igwe ojii dị na mbara igwe na mpaghara oke ala nke ahịhịa coniferous. N'ebe a kwa, ihe omuma nke mmiri ozuzo na mmiri ozuzo.
Oyi okpomọkụ ala
A makwaara ya site na aha microthermal. Ọ bụ ala ebe okpomọkụ dị ala karịa, na nkezi banyere 15-17 ruo 8 degrees. Ha na-adịkarị n’ebe dị elu n’agbata afọ 2000-3400 n’ogologo. N'ebe a, a na-eru njedebe nke osisi, ya mere, ọ bụ ogo kachasị elu maka ụdị ụdị ndụ a iji mepụta. Naanị ụdị ndị a na-emegharị maka ihu igwe ndị a nwere ike ịmalite.
Ọ bụ nke ahụ dị warara dị n'etiti 3400-3800 mita n'elu oke osimiri na okpomọkụ si na 12-8 gaa 0 ogo. Oge abalị na-eru ebe oyi na-atụ ma na-adịkwa mmiri ozuzo n'ụdị snow. N'ọnọdụ ụfọdụ enwere oke mmiri ozuzo, mana n'ọtụtụ mmiri enwere mmiri bụ mmachi.
Ọ na - apụtakarị na mpaghara kachasị elu na ebe kpọrọ nkụ ebe ifufe na - abata ahapụlarị iru mmiri ha niile n'okporo ụzọ.
Ọ na-adịkarị n'etiti mita 4.000-4.800 karịa ọkwa mmiri ma kwekọọ na mpaghara nke snow na-adigide. N'ebe a ka mmiri ozuzo dị n'ụdị snow na obere okpomọkụ na-egbochi agbaze ha, na-emebi mpaghara anyanwụ n'ọtụtụ buru ibu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ala ọkụ na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ala oyi